Thelekisa UMTHETHO OQALISWA KWEKholeji zeNkomfa ezili-12
Ukuba uyazibuza ukuba unomsebenzi we-ACT izikolo ozakufuna ukuba ungene kwiyunivesithi ezinkulu zeNkomfa ezili-12 , nantsi uqhathaniso oluhlangeneyo lwamanqaku ngama-50% aphakathi kwabafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwenye yezi ziko.
Qaphela, ewe, ukuba ii-ACT izikolo ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa adlulisiweyo angama-12 aya kukhangela irekodi ephakamileyo yesikolo, isicatshulwa esenziwe kakuhle kunye nemisebenzi eyenziweyo yecandelo lexesha eliqhelekileyo .
I-12 yeNkomfa UMTHETHO I-Score Ukuthelekiswa (phakathi kwama-50%)
State Iowa 22 28 21 28 22 28
State Kansas - - - - - -
E Oklahoma 23 29 23 30 23 28
ETexas 26 32 25 33 26 33
Christian Texas 25 30 25 32 25 29
U-Mukti Uchazwe: Ukunyuka kwamanzi kunye nofikelelo lweSindiso
Izikolo Ziyakwazi Njani iHholide leeNkolo?
Imbali, izitayela kunye neempembelelo zoMculo wasePuerto Rican
I-8 Iindlela eziLungileyo eziLungileyo ezivela kwiNkulumbano yeNtsapho yaseNtshonalanga
IiNcwadi zeeNgcali zeeNcwadi zeeNtsana
Inkqubo ye-Sprint Triathlon yabaQaleli
Indlela yokwazisa iPhepha le-Watercolor
Kutheni i-Rock Stand Sioux Melana nePipeline Access Access